सरकारलाई किरण चेम्जाेङकाे खुल्लापत्र - DURBAR TIMES
HomeSportsसरकारलाई किरण चेम्जाेङकाे खुल्लापत्र
आदरणीय राष्ट्रिय खेलकुद परिसद तथा सम्माननीय सरकारलाई मेरो सानो खुल्ला पत्र लेखन चाहन्छु। म नेपाली राष्ट्रिय टोलीको तर्फबाट कप्तान किरण चेम्जोङ।
आपनो व्यक्तिगत तर्फबाट र एन्फाको तर्फबाट सरकारलाई के सम्झाउन चाहन्छु भने फूटबल मात्रै नभएर सम्पूर्ण खेलकुद गतिविधि सबै मापदण्ड पूरा गरि पुर्ण सुचारु गर्न हजुरहरुलाइ अनुरोध गर्दछु। किन एक कान दुइकान गर्दै हुनुहुन्छ? खेलाडी सँधै मर्ममै पर्ने र मर्ने हो भने तपाईंहरुले सम्बन्धित निकायमा बसेको के अर्थ रह्याे र? । खेलाडी चैँ सधैं काठमान्डौँको धुलोमा तपाईंहरु चै चिल्लो गाडीमा ?
नेपाली खेलकुद मन्त्रालय र नेपाली खेलकुद परिसदका माननीयज्यूहरू र नेपाल सरकारले सायद बिर्सनुभयो होला देशको नाम खेलकुद र खेलाडीले चिनाउने गरेको छ। तर यतिका महीना खेलाडी ,खेलकुद कुन दुर्दशामा छ भन्ने अलिकति पनि चासोको विषय नबनेको देख्दा फूटबलमा भविष्य खोज्ने भाइबैनीहरुमा कत्तिको असर परेको छ भन्ने कुरा खुलस्त रुपमा देख्न सकिन्छ।
सम्पूर्ण देशमा फूटबल सुरु भैसक्दा पनि हाम्रो देशमा खेलकुदको विषयमा बोली दिने मान्छे भएन । खेलाडीका लागि मात्र होइन खेलकुदका लागी पनि बोलिदिने मान्छे भएन । सबै देशमा फूटबल सुरु भैसक्दा पनि हाम्रो देसमा खेलमैदानको लागि दु:खद घडीमा बनाएको रंगशालामा फिलिमको सुटिङ ,म्युजिक भिडियाेको लागि प्रवेस खुल्ला हुने, फूटबलखेल्न चै किन नहुने? फूटबलले देशका लागि त्यति ठूलो असर पार्छ र ?
अबका दिनमा सम्पूर्ण खेलमैदानमा खेल सुचारु गर्दिन अनुरोध गर्दछु । आखिर कैलेसम्म नेपाली फूटबलको लोकदोहोरी फेसबुकमा हेरेर बस्ने हामीले? नेपाली फूटबलको बिकाशका लागि कसैले केही गरेकाे देखिएन । फूटबल खेलाडीले खेल्न बिर्सीसके। सरकार, फूटबल राजनिती जस्तो होइन बोलेर मख्ख पर्न । फूटबलमा हात खुट्टाले दिमाग लगाएर खेल्ने गरिन्छ। चिल्लो गाडिमा बसेर गफ लगाए जस्तो सजिलो हुन्न । २ खुट्टा चलाएर घर परिवार हेर्नूपर्ने हुन्छ।
७ महिना देखि बेरोजगार भएका खेलाडीको क्षतिपुर्ती कस्ले दिन्छ ? जुन खेलाडी खेलेर नै जिबिका चलाउँथ्याे उ आजभोलि खेलमैदान छोडेर बिदेश पो जाँदै छ त। लाज हुने कुरा होइन यो , खेलाडी खेलकुद र राज्यकाे माननीय ज्यू?। जय देश जय देश जय नेपाली फूटबल ।
Previous articleजर्मनी र स्वीट्जरल्यान्ड भिड्दै
Next articleविश्वकै सबैभन्दा ठूलो मध्येको गुलाबी हिरा नोभेम्बर ११ मा रूसबाट विक्री गरिने